Kunhuwira Ropa uye Kutya muNew Resident Evil 7 4D Kenduru - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Kunhuwira Ropa uye Kutya muNew Resident Evil 7 4D Kenduru
Kunhuwira Ropa uye Kutya muNew Resident Evil 7 4D Kenduru
by arun January 5, 2017
by arun January 5, 2017 1,035 maonero
Yakanyorwa naShannon McGrew
Vazhinji vanotyisa mafeni vava kujairana neiyo “Anogara Akaipa” kodzero, sei vangave vasina?
Izvo zvakasikwa zvave chinhu chakakosha mukati meanotyisa mhando kubvira mutambo wevhidhiyo wabuda muna 1996 uye firimu muna 2002. Nekutarisira kwemutambo wavo mutsva,"Anogara Zvakaipa 7: Biohazard", iyo inotora vaoni kupinda munzvimbo yevaraidzo ye4D muna Ndira 24, imwe kambani inoda kuwedzeredza pfungwa dzako zvakanyanya.
Geek mutengesi Merchoid achange achiburitsa a "Kugara Zvakaipa 7: Ropa, ziya, uye Kutya 4D VR Kenduru" Mukupemberera kwechikamu chazvino.
Kana uri mukati mukati mugari Zvakaipa hazvina kukwana, ivo vagadziri veropa voti vakazvigadzira nenzira yakadaro kuti ubatanidze pfungwa yako yekunhuhwidza, ichikupa iwe chiitiko chakasimudzirwa, kupfuura magogogi.
Handina chokwadi kana chiri chinhu chakanaka, asi ndinofanira kubvuma kuti ndinoshamiswa. Vagadziri vacho vanotaura kuti hwema hunenge huchiyeuchidza nezve "matanda ekare, dehwe, pamwe pamwe rimwe ropa…" inova nhanho iri pamusoro pehwema hwezvitunha zvinoora.
Kana iri yekunhuhwirira kuri kuramba kuripo? Makenduru akagadzirirwa kuti agare angangoita 18-20 maawa uye ane mutengo wemutengo we $ 18.99 iyo isiri yakawandisa kana uchiwana kenduru yemhando yepamusoro - kunyangwe kana ichitenderedza kufa, kuparadzwa, uye kusafa
Zvinotaridza sekunge makenduru haasati ave kutengeswa parizvino pawebhusaiti, asi ini ndinonzwa sekukangowedzerwa, vanozotengesa, saka ita shuwa kuti urambe uchitarisa zvekare kuMerchoid.
Ichi chinhu chinofanirwa-kuve nechinhu, kunyanya kana iwe uchida kuchisanganisa neako ruzivo rwekutamba kana uchitamba "Anogara Zvakaipa 7: Biohazard".
Kwandiri, ndinongofara kuona makenduru ayo akagadzirwa mushure medu vatinofarira mafirimu anotyisa uye vatambi uye ndinotarisira kuramba ndichiunganidza yangu yemakenduru akazadzwa nezvinotyisa. Iyo inogara iri huru hurukuro yekutanga.
update: Makenduru anotengeswa kunze kweMerchoid, asi achiri kuwanikwa kuburikidza neNumskull.
Bhurawuza Cateories Select Category 4K UHD (7) Amazon (bhaisikopo) (11) Amazon (dzakateerana) (12) AppleTV + (6) Blu mahara (21) Comedy Horror (50) Comics (14) Kutonhorera Zvinhu Kuti Utenge (32) Kutonhodza Zvinhu Kuita (7) Nhau dzevaraidzo (9) Facebook (akateedzana) (1) Ngano (45) Yakawanikwa Footage (27) Gore (24) Halloween (1) Haunts (6) HBO (mafirimu) (6) HBO (dzakateerana) (7) Horror Mabhuku (63) Horror Varaidzo Nhau (11,040) Anotyisa Mafirimu (456) Zvinotyisa Series (137) Zvinotyisa Subgenres (11) Hulu (akateedzana) (6) Bvunzurudzo (bhaisikopo) (43) Nhaurirano (dzakateerana) (5) LGBTQ Inotyisa (42) Lists (mafirimu) (41) Lists (akateedzana) (2) Pamusika (21) Monster Horror (10) Bhaisikopo Clip (3) Wongororo dzeMovie (78) Mafirimu (17) Mumhanzi (39) Netflix (bhaisikopo) (33) Netflix (akateedzana) (51) Kwete-Ngano (5) Zvakaenzana (77) Psychological Horror (zvinonakidza) (53) Nyaya (1) Series Ongororo (10) Kubvunda (bhaisikopo) (56) Kubvunda (dzakateerana) (19) Slasher (4) Shamisa uye Zvisingawanzo (40) Kutenderera Mafirimu (121) Kuratidzira Series (48) Zvidhori (5) Ngoro (Mitambo) (1) Ngoro (firimu) (316) Ngoro (dzakateedzana) (51) Ngarava Mitambo (1) Mhosva Yechokwadi (49) TV Series (6) Vhidhiyo Mitambo (197) YouTube (bhaisikopo) (3) YouTube (akateedzana) (13)
TMNT X Universal Monsters NaRaphael SaFrankenstein's ...
Iyo Trailer yeNew York Ninja Inoputika Ne ...
[Nightstream Ongororo] 'Zita Pamusoro Pechinyorwa' ndiGiallo ...
'Mutambo' Wetrailer Unotipa Imwe Kupinda Kunogadzikana ...
'Asingazivikanwe Mhuka' Ngoro Inosvitsa Nyika Mune Iyo ...